Ethan Ampadu tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home STARS EUROPEAN Ethan Ampadu tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Janoary 6, 2019
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny "football genius" izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Ny David Luiz manaraka". Ny tantaran-tantaran'Atoa Ethan Ampadu momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny fanadihadihana dia ny fiainam-piainany, ny fiainam-pianakaviany, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany ho an'ny ho avy. Na izany aza, vitsivitsy monja no mihevitra ny biography etanin'i Ethan Ampadu izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Voalohandohan'ny fiainana
Manomboka eo, ny anarany feno dia Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu. Etan Ampadu dia teraka tamin'ny 14 September 2000 tamin'ny ray aman-dreniny Mr sy Kwame Ampadu tany Exeter, Royaume-Uni.
Ethan dia avy amin'ny fianakaviana samy hafa fiaviana. Ny reniny izay fantatra tsy fantatra dia avy any Pays de Galles, ary ny rainy, Kwame dia avy any Ganà. Teraka tamin'ny fianakaviana mpilalao baolina kitra i Ethan, noho ny rainy Kwame Ampadu, mpilalao baolina kitra irlandey teo aloha izay nilalao tao amin'ny Arsenal anglisy voalohany ary lasa mpanazatra ho an'ny ekipa tanora sy U18. Eny Eny!, Vakinao izany fotsiny, Arsenal izany!
Sarotra ho an'ny dadan'i Ampadu ny miatrika ny fisotroan-dronono. Ny kintan'ny Arsenal teo aloha tamin'ny fisotroan-dronona dia nanapa-kevitra ny hanohy hiaina ny nofiny amin'ny alalan'ny zanany lahy Ethan.
Ny Ethan Ampadu faly izay hita tetsy ambony dia nihalehibe tao amin'ny sekolin'i Ladysmith zazakely izay nanomboka nilalao baolina fifaninanana nandritra ny fotoana ara-panatanjahantena. Tsy ampy ny fandraisana anjara tamin'ny fanaovana baolina kitra. Ny ray aman-drenin'i Ethan Ampadu koa dia naniry ny zanany haka hetsika hafa any am-pianarana. Ny iray tamin'ireo dia ny hetsika fialantsasatry ny sekolin'i Tudor.
Iray amin'ny hetsika mahafinaritra an'i Ethan ny azy ny Sekoly Fankalazana ny fetin'ny biby toerana izay hanaovany akanjo toy ny biby, amin'ity tranga ity, vorondolo iray. (DevonLive Report)
Tsy dia fantatr'ireo mpiara-mianatra taminy fa ho lasa Chelsea FC Star indray ilay zazalahy nanao akanjo toy ny vorondolo.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fitiavan'i Ethan ho an'ny baolina kitra dia nahita azy nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny ekipa tanora ao an-toerana, Stoke Hill eo ambanin'ny 10 izay nanome azy sehatra handaminana ny fototra niasany.
Mpanazatra ny rainy no nampiofana ny ekipany U18 alohan'ny hifindrana ho an'ny tanora ao amin'ny Arsenal. Ethan dia nanomboka nilalao ho an'ny City Exeter raha mbola any an-tsekoly noho ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreniny. Samy nanaiky i Ethan sy ny ray aman-dreniny fa hanohy ny fianarany izy mandra-pahatongany amin'ny GCSE azy.
Ny fampifandraisana ny fanabeazana sy ny baolina kitra dia nitarika azy hanana fisehoan-javatra voafetra. Ny finoany sy ny fanapahan-keviny izay nitazona ny teny fiambenany dia nandoa vola taminy raha nanomboka nanomboka ny fisoratana ny Ethan sy ny ekipany U11.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Road to Fame
Ny Hunt for Manchester United:
Tamin'ny taona 12, i Ethan dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana tao Manchester. Ilay zazakely dia nanandratra ny rehetra tamin'ny fifaninanana, anisan'izany ny ekipan'i Manchester United, Sir Alex Ferguson izay naniry ny hanasonia azy hanao sonia Red Devils. Ferguson dia mahatalanjona Ampadu manana sidina avo kokoa noho ny ankamaroan'ny mpanohitra azy, izay mamela azy hitarika ny baolina tsara kokoa.
Indrisy anefa fa tamin'ny fotoana nandehanany sy ny fidiran'ny klioba nanaraka an'i Ed Woodward izany dia nahatonga ny tanora hanao sonia ny fahalianana hialana.
Tamin'ny taona 15 tamin'ny Desambra 2015, ny asan'ny Ethan dia niaraka tamin'i Exeter City.
Tamin'izany fotoana izany, izy dia nirotsaka ho an'ny ekipa zokiny ao Exeter City na dia eo aza ny sekolin'ny fanonganam-panjakana miaraka amin'ny baoliny kitra.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Tamin'ny andron'ny 9 tamin'ny volana aogositra Xunum, nanomboka namorona tantara i Ampadu tamin'ny famongorana rakitsoratra 2016 taona napetrak'i Cliff Bastin. Izy no lasa mpilalao taloha ao amin'ny Exeter City (taona 15 taona 10 volana sy 26 andro) ho an'ny lalao fiadiana ny amboara. Nahazo ny lehilahy amin'ny loka izy noho ny lalao.
Fotoana izao no nahazoany fankatoavana iraisam-pirenena niaraka tamin'ny ekipa nasionalista Welsh U17 ary taorian'izay, ny ekipa zokiny herintaona taty aoriana (May 2017).
Raha ny marina tamin'ny 1st of July 2017, Ampadu dia nanao sonia fifanarahana niaraka tamin'ny klioban'ny London Premier League Chelsea FC. Ity fanapahan-kevitra ity dia tonga taorian'ny nanoratany sy nandany ny mari-pahaizana ankapobeny momba ny fanabeazana faharoa (GCSE).
Ny rakitsary Chelsea FC:
Tamin'ny andro 20T ny volana septambra 2017, Ampadu dia nanao ny laharam-boninahitra ho an'i Chelsea tamin'ny lalao fahatelo tamin'ny lalao EFL tany amin'ny Nottingham Forest. Nanao izany izy mpilalao voalohany teraka tao amin'ny 2000s mba hilalao ho an'ny ekipa ambony ao amin'ny Club. Ny ambiny, araka ny filazan'izy ireo, dia tantara.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Relationship Life
Iza moa ny sipany avy ao Ethan Ampadu?
Hambara ny fahamarinana. Ampadu dia olona tsy afa-misaraka amin'ny fanaraha-maso ny mason'ny besinimaro noho ny fitiavany ny fiainany manokana farafaharatsiny amin'izao fotoana izao.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Fiainana manokana
Ny fahazoana mahafantatra ny fiainanao manokana an'ny Ethan Ampadu dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Izy dia olona iray tapa-kevitra sy hentitra ary hanao fikarohana mandra-pahitany ny lalana mankany amin'ny anjarany.
Etana dia tia an'i Chelsea na dia rainy aza ny talen'ny U18. Amin'izany fotoana izany dia matetika izy no mitsidika an'i Stamford Bridge an'i Chelsea amin'ny maha-15 taona azy. Tamin'ny faharesen-dahatra sy ny finoanoam-po, nanjary zava-misy ny nofinofin'i Ampadu nilalao teo amin'ny Bridge.
Ethan Ampadu hatramin'ny androany dia mbola mihantona miaraka amin'ireo namany taloha izay nahafantatra ny fomba niatrehany ny lazany. Izy dia mifatotra amin'ny olona izay mihazona azy.
Ethan Ampadu's LifeStyle:
Ethan Ampadu dia olona manana fiainana miavaka. Afaka mamolavola sambo ho an'ny tenany izy eo amin'ny sehatry ny fampiharana ny dobo filomanosana ao an-tranony.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ethan Ampadu dia avy amin'ny fianakaviana manetry tena. Kwame Ampadu sy ny vadiny malalany dia mirehareha noho ny nanafahany ny tsara indrindra tamin'ny zanany Ethan zanany. Ankehitriny, ny raim-pianakaviana sy ny zanany dia mankafy ny faritra misy azy ao amin'ilay lalao mahafinaritra.
Mahalala bebe kokoa momba ny Rainy Ethan Ampadu:
Patrick Kwame Ampadu dia teraka tamin'ny 20 December 1970 tamin'ny renim-paritra irlandey iray sy ny ra Ghaneana tany Bradford, Royaume-Uni. Patrick Kwame, na dia teraka tany Angletera aza izy, dia mihevitra ny tenany ho Irlandey noho ny mamanany. Ampadu dia nasongadina ho an'ny klioba Arsenal, Swansea City, Leyton Orient ary Exeter City tao anatin'ny asa fitia iray izay niompana tamin'ny 1988 ka hatramin'ny 2006 (taona nanombohan'ny zanany lahy ny asany tamin'ny fahatanorany). Patrick Kwame nanasongadina an'i Arsenal nandritra ny taona 1988 hatramin'ny 1991.
Taorian'ny fisotroan-dresaky ny baolina kitra, dia niverina tao Exeter i Kwame Ampadu ary anisan'ny ekipa mpanazatra ny klioba. Fotoana iray nandrisika ny zanany lahy Ethan Ampadu hanomboka ny asany amin'ny klioba. Ny Irlandey dia nifindra tany Arsenal tamin'ny 2012 ary nanjary mpanazatra ny Under 14 sy Under 18.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Ethan dia mpiandraikitra mpanampy AS Monaco izay miasa miaraka amin'ny mpitantana ny Monaco amin'izao fotoana ary ny Legend Arsenal Thierry Henry. Ity ambany ity ny sarin'ireo mpitantana.
Ny fiandohan'ny Ethan Ampadu - Ny fahazoana ny marina:
Ny anaran'ny rain'i Ethan dia Patrick Kwame Ampadu izay mitovy amin'ny mpihira Ghaneana malaza sy Highlife izay antsoina koa hoe Patrick Kwame Ampadu. Betsaka no mino fa ny mpanakanto Ghanian Highlife miaraka amin'ny rakitra 800 dia zanaky ny rain'i Ethan.
Mifanohitra amin'ny fampahalalam-baovao mahatsiravina araka izay notaterin'ny Kobby Kings of Modern Online Ghana Media, ny mozika malaza amin'ny fiainana an-dàlambe dia tsy ilay dadabe na ray aman-drenin'i Ethan Ampadu.
Ethan Ampadu Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony Biography Facts- Untold Facts
Momba ny anarany:
Ethan dia nomena anaram-bositra avy amin'ireo mpilalao baolina sy mpankafy azy ho "Manaraka an'i David Luiz". Izany dia vokatry ny volony feno tandrify azy izay mamaritra ny fisehon'i David Luiz. Ireo samy mpilalao baolina kitra dia mahatakatra ny baolina ho "lalao iombonana"Ary ny tanjany dia zavatra manokana.
Afaka avela hilalao ho an'ny firenena 4:
Ethan Ampadu dia manana rakitsoratra ho mpilalao baolina matanjaka vitsivitsy izay nahazo fanasana mivantana am-pirahalahiana ho an'ny firenena 4 namely azy; Ghana, Irlandy, Angletera ary Pays de Galles.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pianakavianay Ethan Ampadu momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Chelsea FC amin'izao fotoana izao
Welsh Football Diary
Yussuf Poulsen Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Billy Gilmour Childhood Tantara Manampy Untold Biography Facts
Fikayo Tomori Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Reece James Childhood Tantara Plus Untold Biography Facts
Kurt Zouma Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Tantara Mason Mount Childhood plus Plus Untold Biography Facts
Callum Hudson-Odoi tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ben Davies ny tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa
Kepa Fitiavana an-tsarimihetsika ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana
Ny tantaram-pitiavan'i Jorginho ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
vannyhenrico - Janoary 26, 2020
Tantara momba ny fahazazan-jaza momba ny fahazazan-jaza miampy Untold Biography Facts
Janoary 26, 2020
vannyhenrico - Janoary 26, 2020 0
Marcos Alonso tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Desambra 12, 2017
Ny tantaran'i Naby Keita momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Jolay 8, 2018
Novambra 3, 2018
Victor Moses Childhood Tantara Mitantara bebe kokoa momba ny tantaram-piainana
Aogositra 22, 2019
Aogositra 1, 2019